Hiiraan Online News About Somalia » Arag Sawirada: laacibta Reer Swedan Zlatan Ibrahimovic oo Door Biday in uu ku Biiro…
Arag Sawirada: laacibta Reer Swedan Zlatan Ibrahimovic oo Door Biday in uu ku Biiro…
Zlatan Ibrahimovic ayaa la sheegay inuu doorbidayey inuu ku biiro kooxda AC Milan halka uu markii dambe kaga biiray kooxda Manchester United, sida uu daboolka ka qaaday Mino Raiola oo leh. “Qalbiga ayay uga yaallaan.”
Markii dhamaaday qandaraaskii Ibra ee Paris Saint-Germain bishii Juun, waxaa hawada ku jirey warar sheegayay inuu ku noqon doono San Siro, balse wuxuu markii dambe u dhaqaaqay dhanka kooxda Jose Mourinho ee ku dheesha Old Trafford.
“Milan qalbiga ayay uga taallaa, sida cadna waa kooxda uu u jecel yahay Talyaaniga, iyo sida dhici karta caalamka. Balse xagaagan waxaan u bayrnay dhanka Manchester United.” ayuu Raiola u sheegay Mediaset Premium.
Kooxda Rossoneri ayaa haatan waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah, maaddaama ay iibsatey dallad Chinese ah, taasoo keentay inay marti ka ahaato suuq-xagaagii, balse waxay lacag sugaysaa 9-ka bishan iyadoo si wayn u geli doonta suuq-jiilaalka Jannaayo.
Sidaa darteed waxaa dhici karta in 34-jirkani uu xagaaga soo aaddan dib ugu soo laabto kooxda AC Milan iyo Serie A.
Ninkan reer Swede ayaa Milano ku tilmaamay “gurigiisa 2-aad” isagoo 2012 qirtay “Milan waa naadiga qura ee aan dib ugu noqon lahaa, haddii aan sidaa yeelo.” iyadoo la ogyahay inaan Ibra weligii dib ugu noqon koox uu soo maray, isagoo kooxdan ku qaatay 2 sano 2010-12, kahor intii aanu PSG u raacin Thiago Silva.
Ibrahimovic ayaa dhaliyay 57 gool, 24 goolna dhigay, 85 kulan oo uu Milan u saftay, isagoo kula guulaystey Scudetto iyo Italian Super Cup.